IZenzo 25 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
25 Ngoko ke uFesto, emva kokungena+ eburhulumenteni belo phondo, imihla emithathu kamva wenyuka waya eYerusalem evela eKesareya;+ 2 yaye ababingeleli abaziintloko namadoda aziintloko amaYuda amnika inkcazelo+ ngokunxamnye noPawulos. Ngoko baqalisa ukumbongoza, 3 bezicelela njengesibabalo nxamnye naloo mntu ukuba amthumele eze eYerusalem, njengoko babemlalele+ ukuze bambulale endleleni. 4 Noko ke, uFesto waphendula wathi uPawulos makagcinwe eKesareya nokuthi naye ngokwakhe wayesele eza kumka kamsinya aye apho. 5 “Ngoko ke abo basemagunyeni phakathi kwenu,” watsho, “mabehle kunye nam baze bayimangalele,+ ukuba kukho nantoni na ephume endleleni ngale ndoda.” 6 Akuba echithe malunga nemihla esibhozo okanye elishumi phakathi kwabo, wehla waya eKesareya, yaye ngemini elandelayo wahlala phantsi kwisihlalo sokugweba+ waza wayalela ukuba kuziswe uPawulos. 7 Akufika, amaYuda awayehle evela eYerusalem ema exhontelene malunga naye, embeka izimangalo+ ezininzi nezinzulu ezo angazange akwazi ukubonisa bungqina bazo. 8 Kodwa uPawulos wazithethelela wathi: “Nxamnye noMthetho wamaYuda nanxamnye netempile+ nanxamnye noKesare andenzanga nasiphi na isono.”+ 9 UFesto, enqwenela ukuzuza ukukholeka+ kumaYuda, wamphendula uPawulos wathi: “Unqwenela ukunyuka na uye eYerusalem uze ugwetywe apho phambi kwam ngokuphathelele ezi zinto?”+ 10 Kodwa uPawulos wathi: “Ndimi phambi kwesihlalo sokugweba sikaKesare,+ apho ndifanele ukugwetywa khona. Andenzanga bubi kumaYuda,+ njengoko nawe ukwazi kakuhle oko. 11 Ukuba ngokwenene ndingumenzi-bubi+ yaye ndenze nantoni na efanele ukufa,+ andizilanduleli ekufeni; kodwa ukuba akukho nanye yezo zinto bandimangalela ngazo aba bantu, akukho mntu unokundinikela kubo njengesibabalo. Ndibhenela kuKesare!”+ 12 Ngoko uFesto, emva kokuthetha nendibano yabacebi, waphendula wathi: “Ubhenele kuKesare; uya kuya kuKesare.” 13 Ke kaloku kwakudlula imihla ethile, uAgripa ukumkani noBhernike bafika eKesareya bekutyelelo lwembeko kuFesto. 14 Ngoko, njengoko babechitha iqela leentsuku apho, uFesto wayandlala phambi kokumkani imibandela ephathelele uPawulos, esithi: “Kukho indoda ethile eshiywe ilibanjwa nguFeliks, 15 yaye xa bendiseYerusalem ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu amaYuda bazisa inkcazelo+ engayo, becela umgwebo wesohlwayo ngokunxamnye nayo. 16 Kodwa ndabaphendula ngelithi asiyonkqubo yamaRoma ukunikela njengesibabalo nawuphi na umntu ngaphambi kokuba umntu omangalelweyo ahlangane ubuso ngobuso nabamangaleli+ bakhe aze afumane ithuba lokuzithethelela ngokuphathelele isimangalo eso. 17 Ngoko ke bakuqukana ndawonye apha, andizange ndilibazise, kodwa ngemini elandelayo ndahlala phantsi kwisihlalo sokugweba ndaza ndayalela ukuba iziswe loo ndoda. 18 Bakuma, abamangali abavelisanga simangalo+ sezinto ezingendawo ebendiba bommangalela ngazo. 19 Basuka nje baphikisana nayo ngokuphathelele unqulo+ lwabo lwesithixo nangokuphathelele uYesu othile owayefile kodwa lowo uPawulos ami ngelithi uyaphila.+ 20 Ngoko, ekubeni ndididekile mayela nale mpikiswano engale mibandela, ndambuza ukuba ebengathanda kusini na ukuya eYerusalem aze agwetywe apho ngokuphathelele le mibandela.+ 21 Kodwa akuba uPawulos ebhenele+ ukuba agcinelwe isigqibo saLowo uyiNgangamsha, ndayalela ukuba agcinwe ndide ndimthumele ngasentla kuKesare.” 22 Ngoko uAgripa wathi kuFesto: “Nam ndingathanda ukumva lo mntu.”+ “Ngomso,” watsho, “uza kumva.” 23 Ngoko ke, ngemini elandelayo, uAgripa noBhernike beza bebonakala benobuyokoyoko+ obuninzi baza bangena kwigumbi labaphulaphuli ndawonye nabaphathi-mikhosi kwakunye namadoda anobuhandiba esixekweni, yaye akuba uFesto enikele umyalelo, bamzisa uPawulos. 24 Waza uFesto wathi: “Kumkani Agripa nani nonke madoda akhoyo kunye nathi, lo mntu nimbona apha ukhalazelwe yiyo yonke inkitha yamaYuda eYerusalem nalapha, ikhwaza isithi akasafanele kuphila.+ 25 Kodwa ndaqonda ukuba akenzanga nto ifanele ukufa.+ Ngoko xa lo mntu ngokwakhe wabhenela+ kuLowo uyiNgangamsha, ndagqiba kwelokuba ndimthumele. 26 Kodwa ngokuphathelele yena andinanto iqinisekileyo endingayibhalela yona iNkosi yam. Ngoko ke ndimzise phambi kwenu, yaye ngokukodwa phambi kwakho, Kumkani Agripa, ukuze, emva kokuvavanywa kwetyala,+ ndibe nento endingayibhalayo. 27 Kuba kubonakala kungekho ngqiqweni kum ukuthumela ibanjwa ndize ndingazibonisi izimangalo ezinxamnye nalo.”